Onye na-ese ihe a na-eji ihe ndekọ ederede maka egwu egwu ya - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Onye na-ese ihe a na-eji ihe edeturu ederede maka egwu ya Art
Onye na-ese ihe a na-eji ihe edeturu ederede maka egwu ya Art
by Mike Emeka September 9, 2018
edere ya Mike Emeka September 9, 2018
Site na ehihe, John Kenn Mortensen bụ nna na-ede ma na -emepụta mmemme telivishọn ụmụaka. N'abalị, ọ na-adọta ndị amoosu, ndị na-egbu egbu na ndị na-egwu egwu na-awakpo ụmụaka. Kama ịmepụta ọhụụ ya na-acha ákwà ma ọ bụ na ntanetị, ọ na-eme ihe egwu ya na odo Post-It.
Mortensen si creepy nkà sitere n'ike mmụọ nsọ nke ihe ndị ahụ na-edina n'okpuru akwa ahụ mgbe ọkụ na-apụ. Lelee etu o si eji ọfịs arụ ọrụ na peeji Instagram ya:
Gaa n'ihu na peeji nke 2 maka ihe egwu egwu John Kenn Mortensen, yana njikọ ya na akwụkwọ ya.
Ihe egwu Artatụ
Mike na-ele "Night of the Living Dead" na PBS mgbe ọ dị obere, ọ chere na ọ bụ akwụkwọ. Ọ na-ejide ya na egwu kemgbe ahụ. Site na ụbọchị, Mike bụ onye edemede UX. O bi na mpaghara Boston na nwunye ya na onye nwe ọla edo ha.
'Nun' na-eti Egwu n'ime Office Box, Isetịpụ Dejuring Franchise Record
'Down a Dark Hall' bụ Ezigbo Paranormal Thriller